ကိုဗစ်ရောဂါအား ခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေ တိုက် ထုတ်ဖို့ အဓိက လုပ်ဆောင်ရမယ့် နည်းလမ်း တစ်ချို့အား ရေးသားဝေမျှပေးလာတဲ့ နီနီခင်ဇော် – Shwe Yoe
Shwe S N | July 14, 2021 | Celebrity, Local News | No Comments
လက်ရှိအခြေအနေမှာ ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုတွေဟာ အတော်ကို ဆိုးရွားနေပြီး လူတော်တော်များများအောက်ဆီဂျင်ပြတ်လပ်တဲ့ အခြေအနေများနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ ဆရာဝန်များကလည်း အတတ်နိုင်ဆုံးထိန်းချုပ်ကာကွယ်နိုင်စေမယ့် နည်းလမ်းများကို ပြည်သူတွေ သိရှိကြစေဖို့ အမြဲလိုလို ရေးသားဝေမျှပေးနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မကြာသေးခင် နာရီပိုင်းလောက်ကလည်း အဆိုတော် နီနီခင်ဇော်ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင်ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံရပါက ပြုလုပ်ရမယ့် အရေးကြီးအချက်အလက်များကို ဗဟုသုတရရှိစေဖို့ ဝေမျှပေးလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုအခြေအနေဆိုးမှာ ကိုယ်ခံအားကို အားကိုးပြီးရောဂါကို တိုက်ထုတ်ကြဖို့ အကြံပေး တိုက်တွန်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရက်ပိုင်း ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ အသက်တွေ အများကြီးရှိနေသလို လုံးဝနေပြန်ကောင်းလာတဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။
အိမ်တိုင်းနီးပါး COVID positive ဖြစ်လာကြတဲ့အတွက် အားလုံးစိတ်ပူပင်နေကြတာကို မြင်တွေ့နေရတာ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတဲ့အတွက် သူမသိသလောက် ကျန်းမာရေးဗဟုသုတများကိုရေးသားဝေမျှပေးဖို့ စိတ်ကူးရလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိက oxygen ပြသနာလို့ မြင်နေကြတဲ့ အပေါ် အိမ်မှာဘယ်လိုမျိုး Home Care Treatment ပေးနိုင်မလဲ၊ ဘယ်လိုနေထိုင်သင့်တယ် ဆိုတာတွေကိုလည်း အခုလို ရေးသားဝေမျှထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
” ပထမဦးစွာအ​နေ​အောက်မှာ​ဖော်ပြထားတဲ့နဲ့ Covid Positive ရဲ့ လက္ခဏာတွေတစ်ခုခု​သော်လည်း​ကောင်းအားလုံးလည်း​ကောင်း​တွေ့ခဲ့ရင်
***အရမ်း မစိုးရိမ်ပဲနဲ့ Treatment ​လေး​တွေ စပြီး လုပ်​စေချင်ပါတယ်****
(စိုးရိမ်မှုလွန်ကဲခြင်းဟာ Oxygen Level ပိုလို့ကျ​စေနိုင်ပါတယ်)
Positive ဖြစ်တဲ့သူနဲ့ ထိ​တွေ့မှုရှိထားပြီး
အိမ်မှာဘယ်လိုSupportive Care ​တွေလုပ်​ပေးနိုင်လဲ?
လကျရှိအခွအေနမှော ကိုဗဈရောဂါကူးစကျပွနျ့ပှားမှုတှဟော အတျောကို ဆိုးရှားနပွေီး လူတျောတျောမြားမြားအောကျဆီဂငျြပွတျလပျတဲ့ အခွအေနမြေားနဲ့ ရငျဆိုငျကွုံတှနေ့ရေပါတယျ။ ဆရာဝနျမြားကလညျး အတတျနိုငျဆုံးထိနျးခြုပျကာကှယျနိုငျစမေယျ့ နညျးလမျးမြားကို ပွညျသူတှေ သိရှိကွစဖေို့ အမွဲလိုလို ရေးသားဝမြှေပေးနကွေတာ ဖွဈပါတယျ။
မကွာသေးခငျ နာရီပိုငျးလောကျကလညျး အဆိုတျော နီနီခငျဇျောရဲ့ လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာတှငျကိုဗဈရောဂါကူးစကျခံရပါက ပွုလုပျရမယျ့ အရေးကွီးအခကျြအလကျမြားကို ဗဟုသုတရရှိစဖေို့ ဝမြှေပေးလာတာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီလိုအခွအေနဆေိုးမှာ ကိုယျခံအားကို အားကိုးပွီးရောဂါကို တိုကျထုတျကွဖို့ အကွံပေး တိုကျတှနျးထားတာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီရကျပိုငျး ဆုံးရှုံးသှားတဲ့ အသကျတှေ အမြားကွီးရှိနသေလို လုံးဝနပွေနျကောငျးလာတဲ့ မိတျဆှသေူငယျခငျြးတှေ အမြားကွီး ရှိပါတယျ။
အိမျတိုငျးနီးပါး COVID positive ဖွဈလာကွတဲ့အတှကျ အားလုံးစိတျပူပငျနကွေတာကို မွငျတှနေ့ရေတာ စိတျမကောငျးဖွဈရတဲ့အတှကျ သူမသိသလောကျ ကနျြးမာရေးဗဟုသုတမြားကိုရေးသားဝမြှေပေးဖို့ စိတျကူးရလာတာ ဖွဈပါတယျ။ အဓိက oxygen ပွသနာလို့ မွငျနကွေတဲ့ အပျေါ အိမျမှာဘယျလိုမြိုး Home Care Treatment ပေးနိုငျမလဲ၊ ဘယျလိုနထေိုငျသငျ့တယျ ဆိုတာတှကေိုလညျး အခုလို ရေးသားဝမြှေထားတာ ဖွဈပါတယျ။
” ပထမဦးစှာအနအေောကျမှာဖျောပွထားတဲ့နဲ့ Covid Positive ရဲ့ လက်ခဏာတှတေဈခုခုသျောလညျးကောငျးအားလုံးလညျးကောငျးတှခေဲ့ရငျ
***အရမျး မစိုးရိမျပဲနဲ့ Treatment လေးတှေ စပွီး လုပျစခေငျြပါတယျ****
(စိုးရိမျမှုလှနျကဲခွငျးဟာ Oxygen Level ပိုလို့ကစြနေိုငျပါတယျ)
Positive ဖွဈတဲ့သူနဲ့ ထိတှမှေု့ရှိထားပွီး
ဘယျလိုလူတှေ ပိုပွီး ဂရုစိုကျသငျ့သလဲ?
-ကလေးသူငယျမြား / သကျကွီးရှယျအိုမြား
-ရောဂါအခံ ရှိထားသူမြား(နှလုံး,သှေးတိုး,ဆီးခြို, အဆုတျရောဂါ,ကငျဆာရောဂါ စသညျဖွငျ့….)ပိုဂရုစိုကျသငျ့ပါတယျ။
အိမျမှာဘယျလိုSupportive Care တှလေုပျပေးနိုငျလဲ?
လုံးတင်းကိတ် ထွက်နေတဲ့ အလှတွေပေါ်လွင်စေတဲ့ ဖက်ရှင်လေး နဲ့ အမိုက်စား ပိုစ့်ပေးကြမ်းနေတဲ့ ရှင်ယွန်းမြတ်